Time Core Messages M10 Grade 1 X | Wordworks
Amabali athile anemifanekiso embalwa okanye angabi nayo kwamifanekiso anokuthi ayijonge umntwana wakho xa umfundela. Amabali alolu hlobo ke akhuthaza abantwana ukuba bazenzele umfanekiso-ngqondweni weenkcukacha zebali ngokunokwabo. Hlalani kwindawo eniza konwaba kuyo nomntwana wakho nize nonwabele ukuphulaphula ibali esilirekhodileyo.
Kubalulekile kakhulu ukuba abantwana bafunde ukuphulaphula amabali ngaphandle kokuncediswa yimifanekiso. Xa umntwana wakho ekwazi ukuphulaphula ngenyameko utsho afumane ithuba lokuva amagama amatsha, indlela aqonda ngayo izinto azivayo nayo iyaphucuka.
Oku ke kuza kumncedisa ekukhuliseni izakhono ezibalulekileyo zokunxibelelana ezifana nokuthetha kunye nokufunda. Xa ufundela umntwana ibali, mgcine enomdla ngokutshintshatshintsha ilizwi nto leyo eza kwenza aqaphele iindawo ezilusizi nezonwabisayo ebalini okanye xa kuthetha omnye umntu. Xa niphulaphule ibali elithi: ‘UFudwazana ufumana ikhaya lakhe’ jonga indlela onokumnceda ngayo enomdla umntwana wakho ukuze alonwabele ibali.
Ukuba umntwana wakho sele elazi ibali, ayinamsebenzi loo nto kuba abantwana bayakuthanda ukuphinda bamamele amabali ebebekhe bawamamela ngaphambili.
Ibali ngoFudo lifumana indlu yakhe